Badhasaab Tiimbaro Iyo Maayar Ismaaciil Oo Ku Kala Aragti Duwan Xaaladda Degdegga Ah - Haldoor News | Haldoor News
Ceerigaabo(Haldoornews) Guddoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Tiimbaro iyo maayarka magaalada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa ku kala aragti fog xaaladda degdegga ah ee madaxweyne Biixi ku soo rogay magaalada Ceerigaabo, Ceelafweyn iyo Garadag. Maayarka ayaa ka soo horjeeda xayiraadda halka uu badhasaabku u arko in aanay wax mushkilad ah gobolka ku hayno bandowda la saaray.
Waxa uu intaasi ku daray in dad shisheeye ah lagu laayay meelo ka mid ah Burco ilaa Boorama sidoo kalena dad isku dilaan laakiin, aan la buunbuunin xayiraadna la saarin laakiin, gobolkiisa xayiraad la saaray iyada oo aanay jirin sabab macquul ah “Way dhacday in xayiraad la soo saaray laakiin, Ceerigaabo dhib kama jirin, waxna laguma layn, waan maqlayay qolyo reer Gabiley ah oo leh xayiraadda maxaa looga qaadaya Ceerigaabo? Ana waxaan leeyaha xayiraadda Gabiley baa xaq u leh ee anagu xaq uma lihin in nala saaro,” ayuu yidhi Maayar Ismaaciil.
“Dadka qaar baa yidhaahda Xayiraad baa Ceerigaabo la saaray oo waxba noo suuro gali maayaan, wax allaale wax xayiraaddaasi inaga xumaysay oo inaga baaqday ma jirto. Xayiraaddu haddii la yidhaahdo dambiile ha la soo qabto oo aynu ku marmarsoono marka dambiila la soo qabanayo wax baa naga khaldan waxay u muuqata in aynu inagu taageersan nahay dambiileyaasha, afkeena maaha la inagana maqli maayo, xayiraaddaasi wax ay ka bedeshay sidii hawl maalmeedkeenu u socday ma garanayo anigu,” ayuu yidhi Badhasaabku